ऊर्जामन्त्री भुसाल र चिनियाँ राजदूत यान्छीबीच शिष्टाचार भेट « रिपोर्टर्स नेपाल
ऊर्जामन्त्री भुसाल र चिनियाँ राजदूत यान्छीबीच शिष्टाचार भेट
काठमाडौँ, १५ साउन: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले आज शिष्टाचार भेट गरेकी छिन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय चासो र हितका विषयमा छलफल भएको छ ।
मन्त्री भुसालले चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्यालाई सहमतिमै सुल्झाउन प्रयास गर्ने बताए । ‘बेल्ट एण्ड रोड’ इनिसियटिभ (बिआरआइ)को विषयमा चीनले पठाएको प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिईन्।
चीनमा उच्च अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी कोभिड–१९ का कारण स्वदेश फर्कनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले ती विद्यार्थीलाई अध्ययन पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन विशेष आग्रह गरिन् । चीन सरकारले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराएर जनस्तरमै गुन लगाएको भन्दै मन्त्री भुसालले चीन सरकारप्रति आभार प्रकट गरिन् । उनले नेपालको विकासमा चीनले पु¥याएको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
भेटमा चिनियाँ राजदूत होउले विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय ऊर्जामा नेपाल सम्भावनायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । चिनियाँ कम्पनीले जलविद्युत्का क्षेत्रमा राम्रो अनुभव हासिल गरेको बताउँदै उनले उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराईन् ।
चिनियाँ पावर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नेपालको माथिल्लो तामाकोशी, त्रिशुली थ्रि ‘ए’लगायत आयोजनामा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राजदूत होउले ती आयोजनामा देखिएका समस्यालाई सुल्झाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन्।
-तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
१४ सांसदको कारबाहीको सूचना प्रकाशित नभएसम्म संसद् चल्न दिन्नौं : नेम्वाङ
काठमाडौं, ३१ भदौ । नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले एमालेले १४ जना
हाम्रो माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न दिँदैनौं : टोपबहादुर रायमाझी (भिडिओसहित)
‘एमसीसीबारे सरकारले पहिले पोजिसन क्लियर गरोस, देशको हितमा नभएका प्रावधान करेक्सन गर्नुपर्छ’ काठमाडौं, ३१ भदौ
सुन काण्डमा मुछिएकालाई पदोन्नति गरेर सरकारले गलत गर्यो, निर्णय सच्चाउनुपर्छ : धनराज गुरुङ
काठमाडौं, ३१ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रसका नेता धनराज गुरुङले सुन घोटाला काण्डमा मुछिएका
माधव नेपालको पार्टीको विधान आफूले नलेखेको भीम रावलको दाबी
काठमाडौं, ३१ भदौ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले आफूले माधव नेपाल
डोटी, ३१ भदौ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले आफूले राजनीति
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र